Maxaa la sameeyaa haddii lammaanuhu been sheego | Bezzia
Maxaa la sameeyaa haddii lammaanuhu been sheego
Maria Jose Roldan | 07/06/2021 22:00 | Xiriirka
Beenta oo dhami isku mid ma aha mana aha isku mid in si aan waxba galabsan loo sameeyo, inaad ku sameyso xumaan oo aad ogtahay inay dhibaato weyn u geysaneyso qofka kale. Xaaladda lammaanaha, beenta soo noqnoqda iyo caadiyan waxay baabi'ineysaa mid ka mid ah qiyamka ugu muhiimsan xiriir kasta: kalsooni.
Kalsooni la'aan adigu dardaaran uma noqon kartid inaad taageerto nooc kasta oo lammaane ah oo loo qaadan karo inay caafimaad qabaan. Looma ogolaan karo duruuf kasta oo jirta in mid ka mid ah labada lamaane ay u adeegsato been si joogto ah hadday taasi dhacdona, waa in sida ugu dhakhsaha badan loo joojiyaa.
1 Beenta lamaanaha
2 Maxaa la sameeyaa haddii lammaanuhu been sheego
Waa run in beentu ay tahay iftiinka maalinta marka laga hadlayo lammaanayaashana sidan kama reeban yihiin. Si kastaba ha noqotee, boqolkiiba inta ugu badan ee beentaasi waxay ka kooban tahay in laga tago xaqiiqooyin kala duwan oo gacan ka geysan kara xoojinta lammaanaha laftiisa. Waa waxa looyaqaano beenta cad waxayna kawada raadsadaan waxwalba inay siiyaan amaan iyo xoog weyn xiriirka laftiisa. Gebi ahaanba waa kala duwan yihiin beenta sida oo kale oo dhaawac weyn u geysata lamaanaha, xitaa jabinta qiime muhiim u ah kalsoonida labada qof.
Haddii ay dhacdo in labada lamaane ay si joogto ah had iyo jeer been u adeegsadaan, waa muhiim in la weyddiiyo lana ogaado sababta uu u adeegsado beenta xiriirka ka dhexeeyo. Halkan laga bilaabo, lammaanaha ayaa mas'uul ka ah go'aaminta haddii ay go'aansadaan inay sii wadaan xiriirka noocaas ah ama haddii aysan u qalmin fursad labaad oo ay gooyaan khasaarahooda. Sikastaba, uma dulqaadan kartid beenaale cudurey maadama xiriirku sumoobayo mana jiri doono nooc aamin ah oo udhaxeeya dhinacyada.
Isku mid ma aha in labada qof ee beenta sheegaa ay hal jeer oo kaliya been sheegeen ama ay u sameeyeen si caado ah. Halkan, qofka la khiyaaneeyey waa inuu isweydiiyo qofka kale ma u qalmaa aaminaad iyo inuu isagu ama iyadu u egyihiin qiyamka ay tahay in laga helo xiriir caafimaad qaba.
Xaaladaha oo dhan, wadahadalka iyo wada xiriirka lamaanaha ayaa fure u ah xalinta nooc kasta oo dhibaato ama khilaaf ah oo dhici kara. Marka taa laga reebo, waa inay jirtaa ballan ka timaadda labada qof, maadaama haddii kale ay tahay wax dib u dhici kara mar dhow ama muddada dhexe.
Isku kalsoonaanta qofka waxyeelloobay ayaa ah dhinac kale oo xisaabta lagu darsado marka beenta la iska cafiyo. Ma ahan wax fudud ama fudud in dib loo dhiso kalsoonidii kala go'day oo haddii xaaladda shucuureed ay hooseyso ay adkaan karto in xiriirkii lagu soo celiyo cagihiisii. Taasi waa sababta isku kalsoonida xaaladaha noocan oo kale ah ay aad muhiim u tahay sidoo kalena muhiim tahay. Waa inaad aad u hubsataa ka hor intaadan qaadin talaabada muhiimka ah ee ah inaad cafiso qofka beenta sheegaaya oo aad siiso fursad labaad.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Cilmu-nafsiga iyo lamaanaha » Xiriirka » Maxaa la sameeyaa haddii lammaanuhu been sheego
Sida loogu qurxiyo qaab dhismeedka birlabta ah